Clean Disk Security 8.03 Full + Crack ~ မိုးညိုသား
Clean Disk Security 8.03 Full + Crack
10:37 PM နည်းပညာ, ဆော့ဝဲလ်များ No comments
မင်္ဂလာပါ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ Clean Disk Secrity V8.03 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ ဖိုင်တွေစိတ်ပူစရာမလိုအောင်ကိုဖျက်ပေးနိုင်တယ်လို့တော့ ဆိုထားပါတယ်။ မလိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေကိ်ု အစအနမကျန်အောင် ဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သတိထားစရာကတော့ မိမိဖျက်အရာကို မဖျက်ခင် သေချာအောင် စစ်ဆေးဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်.. ဖျက်ပြီးသွားရင်တော့ ပြန်လည်၍ Recovery လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး လုံးဝအရှင်းကို ဖျက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ data တွေကိုဖျက်တဲ့နေရာမှာ. အသုံးဝင်လှပါတယ်။ သူရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတော့ အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ.. ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ ပေးထားတဲ့လင့်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ
Features of Clean Disk Security 8.03 Full + Crack
Special support for Firefox.
OS : Win98/ME/NT/2000, WinXP, Vista, Windows7and Windows 8, both 32 bit & 64 bit.
ဒေါင်းရန်>>> (Mediafire ၊ Zippyshare)